Izinqolobane ZaseDow - ILungelo LaseMelika Lokukwazi
Posted on February 24, 2020 by UStacy Malkan
Imibhalo etholwe yi-US Right to Know neminye imithombo ikhanyisa ukusebenza kwangaphakathi kwe Umkhandlu Wokwaziswa Kwezokudla Womhlaba Wonke (IFIC), iqembu lezentengiselwano elixhaswe izinkampani ezinkulu zokudla nezolimo, kanye "nengalo yalo yezemfundo yomphakathi" engenzi nzuzo Isisekelo se-IFIC. Amaqembu e-IFIC aqhuba izinhlelo zocwaningo nezokuqeqesha, akhiqiza izinto zokumaketha futhi axhumanise amanye amaqembu embonini ukuxhumana nomkhakha wezokuphepha mayelana nokuphepha kokudla nokondleka. Ukulayeza kufaka phakathi ukukhuthaza nokuvikela ushukela, ukudla okusetshenzwe, okokunandisa okokufakelwa, izithasiselo zokudla, izibulala-zinambuzane kanye nokudla okwenziwe ngezakhi zofuzo.
Ukuphotha umbiko womdlavuza wezibulala-zinambuzane weMonsanto
Njengesibonelo esisodwa sendlela i-IFIC ebambisana ngayo nezinkampani ukukhuthaza imikhiqizo yezolimo kanye nokuphazamisa ukukhathazeka ngomdlavuza, lokhu idokhumenti yangaphakathi yeMonsanto ikhomba i-IFIC njenge- “Umlingani wezimboni” ohlelweni lobudlelwano bomphakathi noMonsanto ukudicilela phansi iqembu labacwaningi ngomdlavuza leWorld Health Organisation, i-International Agency for Research on Cancer (IARC), ukuze “kuvikelwe isithunzi” seRoundup weedkiller. Ngo-Mashi 2015, i-IARC yahlulela i-glyphosate, isithako esiyinhloko ku-Roundup, ukuthi ibe mhlawumbe i-carcinogenic kubantu.
IMonsanto ibhale i-IFIC njengoMlingani “wezimboni” weTier 3 kanye namanye amaqembu amabili axhaswe izimboni zokudla, i- Inhlangano Yabenzi Begilosa futhi Isikhungo Sobuqotho Bokudla.
IFICIC izama kanjani ukudlulisa umyalezo wayo kwabesifazane.
La maqembu akhonjwa njengengxenye “yethimba le-Stakeholder Engagement” elingaxwayisa izinkampani zokudla “ngecebo lokugoma” likaMonsanto ngombiko womdlavuza we-glyphosate.
AmaBlogs kamuva athunyelwa ku- Iwebhusayithi ye-IFIC khombisa ukuthunyelwa kweqembu "ungakhathazeki, sethembe" imiyalezo kwabesifazane. Okungenayo kufaka phakathi, “izindlela eziyi-8 zobuhlanya abazama ukukwesabisa ngazo ngezithelo nemifino,” “Ukusika imfuhlumfuhlu ku-glyphosate,” nokuthi “Ngaphambi kokuba sidangele, ake sibuze ochwepheshe… ochwepheshe bangempela.”
I-IFIC isebenzise imali engaphezu kwezigidi ezingama- $ 22 esikhathini esiyiminyaka emihlanu kusukela 2013-2017, ngenkathi i-IFIC Foundation ichithe imali engaphezu kwezigidi ezingama- $ 5 kuleyo minyaka emihlanu, ngokusho kwamafomu entela afakwe kwi-IRS. Izinkampani namaqembu ezimboni asekela i-IFIC, ngokusho kwe- ukudalulwa komphakathi, kufaka phakathi i-American Beverage Association, American Meat Science Association, Archer Daniels Midland Company, Bayer CropScience, Cargill, Coca-Cola, Dannon, DowDuPont, General Mills, Hershey, Kellogg, Mars, Nestle, Perdue Farms kanye nePepsiCo.
Amarekhodi wentela esalungiswa e-IFIC Foundation, atholakele ngezicelo zamarekhodi wombuso, uhlu lwezinkampani ezixhase iqembu 2011, 2013 noma zombili: I-Grocery Manufacturers Association, i-Coca-Cola, i-ConAgra, i-General Mills, i-Kellogg, i-Kraft Foods, i-Hershey, i-Mars, i-Nestle, i-PepsiCo ne-Unilever. UMnyango Wezolimo wase-US unikeze i-IFIC Foundation imali engu- $ 177,480 yabakhokhi bentela e 2013 ukukhiqiza "umhlahlandlela wezokuxhumana”Yokukhuthaza ukudla okwenziwe ngezakhi zofuzo.
I-IFIC iphinde icele imali ezinkampanini ngemikhankaso ethile yokuvikela umkhiqizo. Le imeyili ka-Ephreli 28, 2014 kusuka kumphathi we-IFIC kuya kuhlu olude lwamalungu ebhodi yezinkampani ucela iminikelo engu- $ 10,000 yokuvuselela i- "Understanding our Food" isinyathelo ukwenza ngcono ukubukwa kwabathengi kokudla okusetshenzisiwe. I-imeyili ibhala abasekeli bezimali bangaphambilini: iBayer, iCoca-Cola, iDow, iKraft, iMars, iMcDonalds, iMonsanto, iNestle, iPepsiCo neDuPont.
Iphromotha ama-GMO ezinganeni zesikole
IFIC iqondisiwe Amaqembu we-130 nge Ukubambisana Ukondla Ikusasa emizamweni yokuthumela imiyalezo "yokuthuthukisa ukuqonda" ngokudla okwenziwe ngezakhi zofuzo. Amalungu afaka phakathi Umkhandlu waseMelika weSayensi nezeMpilo, lo Umkhandlu Wokulawulwa Kwekhalori, the Isikhungo Sobuqotho Bokudla kanye ne-The Nature Conservancy.
I-Alliance to Feed the Future inikeze ngezifundo zamahhala zemfundo ukufundisa abafundi ukukhuthaza ukudla okwenziwe ngezakhi zofuzo, kufaka phakathi “Isayensi Yokondla Umhlaba”Kothisha be-K-8 kanye ne-“Ukuletha i-Biotechnology empilweni”Zamabanga 7-10.
Ukusebenza kwangaphakathi kwezinsizakalo ze-IFIC's PR
Uchungechunge lwemibhalo etholwe yi-US Right to Know unikeze umuzwa wokuthi i-IFIC isebenza kanjani ekusithekeni ukuze ivule izindaba ezimbi futhi ivikele imikhiqizo yabaxhasi bayo bezinkampani.
Ixhuma izintatheli kososayensi abakhokhelwa yimboni
Meyi 5, 2014 imeyili kusuka kuMat Raymond, umqondisi omkhulu wezokuxhumana, uxwayise ubuholi be-IFIC kanye "neqembu lezingxoxo zabezindaba" "ngezindaba ezisezingeni eliphakeme lapho i-IFIC ibandakanyeka khona manje" ukusiza ukuhambisa izindaba ezingezinhle, kufaka phakathi ukuphendula i-movie ethi Fed Up. Uphawule ukuthi baxhume intatheli yeNew York Times no “Dr. UJohn Sievenpiper, uchwepheshe wethu odumile emkhakheni woshukela. ” USievenpiper “uphakathi kweqembu elincane lososayensi abafundile baseCanada abathole amakhulu ezinkulungwane oxhaso kubenzi beziphuzo ezithambile, izinhlangano zokuhweba ngokudla okuhlanganisiwe kanye nomkhakha kashukela, okwenza izifundo nezihloko zemibono ezivame ukuqondana nezintshisekelo zalawo mabhizinisi, ” ngokusho kweNational Post.
Ngo-February 27, i-2013, Abasebenzi be-IFIC bafuna ukuhlaziywa kuJames Hill ukuze babhekane nephepha elibhalwe ngokuhlanganyela nguDkt Robert Lustig ukuxhuma ushukela nesifo sikashukela. UHill wayengumqondisi weGlobal Energy Balance Network, iqembu langaphambili uxhaswe ngabakwaCoca-Cola ukususa impikiswano mayelana nokukhuluphala kude nokukhathazeka ngoshukela. Lezo zambulo zidale ukuthi i-GEBN ibe hlakazeka ngo-2015.
Ama-imeyili avela ku- 2010 futhi 2012 ziphakamisa ukuthi i-IFIC incike eqenjini elincane lososayensi abaxhunywe embonini ukubhekana nezifundo eziphakamisa ukukhathazeka ngama-GMO. Kuwo womabili ama-imeyili, uBruce Chassy, ​​uprofesa wase-University of Illinois ngubani uthole izimali ezingadalulwanga ezivela eMonsanto ukukhuthaza nokuvikela ama-GMO, kweluleka i-IFIC ukuthi ingaphendulwa kanjani ezifundweni eziphakamisa ukukhathazeka ngama-GMO.
Isikhulu seDuPont siphakamisa isu lobuchule lokulwa nemibiko yabathengi
Phakathi ku Februwari 3, 2013 imeyili, Abasebenzi be-IFIC baxwayisa "iqembu lobudlelwano nabezindaba" ukuthi Imibiko Yabathengi ibike ukukhathazeka mayelana nokuphepha kanye nomthelela wezemvelo wama-GMO. UDoyle Karr, Umqondisi wenqubomgomo ye-biotechnology kaDuPont nephini likamongameli webhodi ye Isikhungo Sobuqotho Bokudla, wathumela i-imeyili kusosayensi onombuzo ngemibono yokuphendula, futhi waphakamisa ukubhekana Nemibiko Yabathengi ngaleli qhinga lokwenza okuthile: nezitatimende ze- (Consumer Reports ') mayelana nokuphepha kanye nomthelela kwezemvelo. ?? ”
Ezinye izinsizakalo ze-PR IFIC inikeza embonini
Kusabalalisa amaphuzu okukhuluma embonini edukisayo: April 25, 2012 thumela kumalungu ayi-130 e-Alliance Ukondla Ikusasa “egameni lelungu le-Alliance Inhlangano Yabenzi Begilosa ” yathi uhlelo lokuvota lwaseCalifornia lokufaka ilebula lokudla okwenziwe ngezakhi zofuzo “lungavimbela ukuthengiswa kwamashumi ezinkulungwane emikhiqizo yokudla eCalifornia ngaphandle kokuthi inamalebula akhethekile.”
Ibhekana nezincwadi ezibucayi ngokudla okusetshenzisiwe: A February 20, 2013 I-imeyili ichaza isu le-IFIC lokuphotha izincwadi ezimbili ezigxeka imboni yezokudla, “Usawoti, Ushukela, Amafutha” kaMichael Moss, kanye ne “Lunchbox kaPandora” kaMelanie Warner. Izinhlelo zazihlanganisa ukubhala ukubuyekezwa kwezincwadi, ukusabalalisa izindawo zokukhuluma kanye "nokuhlola ezinye izindlela zokuthuthukisa ukuzibandakanya kwabezindaba zedijithali kulinganiswa ubukhulu bokusabalala." Ku-imeyili kaFebhuwari 22, 2013, umphathi we-IFIC welulela izifundiswa ezintathu - URoger Clemens wase-University of Southern California, UMario Ferruzzi wasePurdue University futhi UJoanne Slavin wase-University of Minnesota - ukubacela ukuthi batholakalele izingxoxo nabezindaba mayelana nezincwadi. I-imeyili inikeze izifundiswa izifinyezo zalezi zincwadi ezimbili nezindawo zokukhuluma ze-IFIC ezivikela ukudla okwenziwe. “Sizokuthokozela ukuthi nihlanganyele noma yimaphi amaphuzu athile okuxoxa ngezindaba ezithile zesayensi eziphakanyiswe ezincwadini,” kusho i-imeyili evela kuMarianne Smith Edge, iphini likamongameli omkhulu we-IFIC wezokudla nokuvikeleka kokudla.
Ucwaningo nocwaningo ukusekela izikhundla ezimbonini; isibonelo esisodwa ngocwaningo lwango-2012 olathola ukuthi abathengi abangama-76% “abakwazi ukucabanga nganoma yini eyengeziwe abangathanda ukuyibona kulebula” esetshenziswa amaqembu embonini ukuphikisana nokulebula kwe-GMO.
“Ungakhathazeki, sethembe” izincwajana zokumaketha, njenge lena echaza ukuthi izithasiselo zokudla nemibala akuyona into okufanele ukhathazeke ngayo. Amakhemikhali nodayi “babambe iqhaza elibalulekile ekwehliseni ukusweleka okukhulu kwabathengi,” ngokusho kwencwajana ye-IFIC Foundation "eyayilungiselelwe ngaphansi kwesivumelwano sokubambisana ne-US Food and Drug Administration."
Ukuqeqeshwa komlayezo kumaqembu ochwepheshe, njengale 2015 uhlelo lokuqeqesha odokotela bezokudla mayelana nokuthi ungawaqhakambisa kanjani ama-GMO.
okokuqala kuthunyelwe ngoMeyi 31, 2018 futhi kuvuselelwa ngoFebhuwari 2020
Ukudla Okucatshangwayo, Izifo Ezihlobene Nokudla, I-GMO, Uphenyo lwethu, izibulala-zinambuzane, Abathandekayo Ukubambisana Ukondla Ikusasa, I-American Beverage Association, Umkhandlu waseMelika weSayensi nezeMpilo, Inhlangano Yezesayensi Yenyama yaseMelika, Inkampani ye-Archer Daniels Midland, Bayer, I-Bayer CropScience, UBruce Chassy, Ikhalori Yokulawula Umkhandlu, ukukhathazeka ngomdlavuza, I-Cargill, Isikhungo Sobuqotho Bokudla, Coca-Cola, I-ConAgra, UDannon, Dow, DowDuPont, UDoyle Karr, Dupont, I-General Mills, I-Global Energy Balance Network, glyphosate, Inhlangano Yabenzi Begilosa, Hershey, IARC, IFIC, Isisekelo se-IFIC, James Hill, UJoanne Slavin, UJohn Sievenpiper, I-Kellogg, Ukudla Kraft, UMario Ferruzzi, Mashi, UMat Raymond, McDonalds, Monsanto, I-Nestle, I-PepsiCo, Perdue Amapulazi, URoger Clemens, Ukulondolozwa Kwemvelo, Ukuqonda uhlelo lwethu lokudla, Unilever, UMnyango Wezolimo wase-US
Posted on October 28, 2019 by UCarey Gillam
Ngenyanga edlule abakwaFood & Drug Administration bashicilele incwadi yabo i- ukuhlaziywa kwamuva konyaka yamazinga ezinsalela zezibulala-zinambuzane ezingcolisa izithelo nemifino nokunye ukudla thina baseMelika esihlala sikubeka kuma-plate plate ethu. Idatha entsha inezela ekukhuleni kwabathengi okukhulayo nasempikiswaneni yesayensi yokuthi izinsalela zezibulala-zinambuzane ekudleni zinganikela kanjani - noma cha - ekuguleni, ezifweni nasezinkinga zokuzala.
Ngaphezu kwamakhasi angama-55 emininingwane, amashadi namagrafu, umbiko we-FDA othi “Pesticide Residue Monitoring Program” Programme ubuye unikeze isibonelo esingathandeki sezinga abalimi base-US abathembele kuzinambuzane zokwenziwa, isikhunta kanye nokubulala ukhula ekukhuliseni ukudla kwethu.
Sifunda, ngokwesibonelo, ekufundeni umbiko wakamuva, ukuthi iminonjana yezibulala-zinambuzane itholakale kumaphesenti angama-84 amasampula ezithelo zasekhaya, namaphesenti angama-53 yemifino, kanye namaphesenti angama-42 okusanhlamvu namaphesenti angama-73 amasampula okudla abhalwe nje “ okunye. ” Amasampula athathwe ezweni lonke, kufaka phakathi eCalifornia, Texas, Kansas, New York naseWisconsin.
Cishe amaphesenti angama-94 wamagilebhisi, ijusi lamagilebhisi kanye namagilebhisi omisiwe ahlolwe kutholakala izinsalela zezibulala-zinambuzane njengoba kwenza amaphesenti angama-99 ama-strawberry, amaphesenti angama-88 ama-aphula nejusi le-apula, namaphesenti angama-33 wemikhiqizo yelayisi, ngokusho kwedatha ye-FDA.
Izithelo nemifino engenisiwe empeleni ikhombise ukwanda okuncane kwezibulala-zinambuzane, ngamaphesenti angama-52 ezithelo namaphesenti angama-46 emifino evela phesheya evivinya ukutholakala kwemithi yokubulala izinambuzane. Lawo masampula aqhamuka emazweni angaphezu kwama-40, okubalwa kuwo iMexico, iChina, iNdiya neCanada.
Siphinde sifunde ukuthi ngesampula esanda kubikwa, phakathi kwamakhulu ezibulala-zinambuzane ezahlukahlukene, i-FDA ithole imikhondo yesibulali zinambuzane iDDT emasampuleni okudla, kanye ne-chlorpyrifos, i-2,4-D ne-glyphosate. I-DDT ixhunyaniswe nomdlavuza webele, ukungazali nokukhulelwa kwesisu, kuyilapho i-chlorpyrifos - esinye isibulala-zinambuzane - sikhonjiswe ngokwesayensi ukuthi sidala izinkinga ze-neurodevelopmental ezinganeni ezisencane.
I-Chlorpyrifos iyingozi kakhulu kangangokuba i-European Food Safety Authority iye yancoma ukuvinjelwa kwamakhemikhali eYurophu, ukuthola ukuthi kukhona alikho izinga lokuvezwa okuphephile. Ukubulala ukhula 2,4-D kanye glyphosate zombili zixhunyaniswe nomdlavuza nezinye izinkinga zempilo futhi.
I-Thailand muva nje wathi bekuvinjelwa i-glyphosate ne-chlorpyrifos ngenxa yobungozi obusungulwe ngokwesayensi balezi zinambuzane.
Ngaphandle kokuxhaphaka kwezibulala-zinambuzane ezitholakala ekudleni kwase-US, i-FDA, kanye ne-Environmental Protection Agency (EPA) kanye noMnyango Wezolimo wase-US (i-USDA), bagomela ngokuthi izinsalela zemithi yokubulala izinambuzane ekudleni empeleni azikhathazi ngakho. Ngesikhathi sokunxenxwa okusindayo yimboni yezolimo i-EPA empeleni isekele ukusetshenziswa okuqhubekayo kwe-glyphosate ne-chlorpyrifos ekukhiqizweni kokudla.
Abalawuli bananela amazwi abaphathi beMonsanto nabanye embonini yamakhemikhali ngokugcizelela ukuthi izinsalela zezibulala-zinambuzane azinabungozi empilweni yabantu inqobo nje uma amazinga ohlobo ngalunye lwensalela ewela ngaphansi kwezinga “lokubekezelelana” elibekwe yi-EPA.
Ekuhlaziyweni kwakamuva kakhulu kwe-FDA, amaphesenti angu-3.8 kuphela okudla kwasekhaya abenamazinga ezinsalela abebhekwa njengokuphakeme ngokungemthetho, noma "okwephula umthetho." Ngokudla okungenisiwe, amaphesenti ayi-10.4 wokudla okwenziwe isampuli ayephula umthetho, ngokusho kwe-FDA.
Lokho i-FDA engakusho, nokuthi yiziphi izinhlaka ezilawulayo ezigwema ukukusho esidlangalaleni, ukuthi amazinga okubekezelelana kwezibulala-zinambuzane ezithile akhuphukile eminyakeni edlule njengoba izinkampani ezidayisa izibulala-zinambuzane zicela imingcele ephakeme naphezulu yezomthetho. I-EPA ivume ukwenyuka okuningana okuvunyelwe izinsalela ze-glyphosate ekudleni, ngokwesibonelo. Futhi, i-ejensi ivame ukwenza isinqumo sokuthi akudingeki ihambisane nesidingo somthetho esithi i-EPA “izosebenzisa elinye ibanga eliphindwe kayishumi lokuphepha ezinganeni nasezinganeni” ekubekeni amazinga asemthethweni ezinsalela zezibulala-zinambuzane. I-EPA yeqe leyo mfuneko esimweni sokubekezelelana okuningi kwezibulala-zinambuzane, yathi ayikho enye indlela yokuphepha edingekayo ukuvikela izingane.
Iphuzu elisemqoka: Ukuphakama kwe-EPA kubeka “ukubekezelelana” okuvunyelwe njengomkhawulo wezomthetho, kunciphisa amathuba okuthi abalawuli kuzodingeka babike izinsalela "ezihlukumezayo" ekudleni kwethu. Ngenxa yalokhu, i-US ijwayele ukuvumela amazinga aphezulu ezinsalela zezibulala-zinambuzane ekudleni kunamanye amazwe athuthukile. Isibonelo, umkhawulo osemthethweni we-killer glyphosate obulala ukhula e-apula uyizingxenye ezingama-0.2 ngesigidi (ppm) e-United States kodwa uhhafu kuphela walelo zinga - 0.1 ppm - uvunyelwe ku-apula e-European Union. Futhi, i-US ivumela izinsalela ze-glyphosate emmbileni ngo-5 ppm, ngenkathi i-EU ivumela i-1 ppm kuphela.
Njengoba imingcele esemthethweni inyuka ngensalela yezibulala-zinambuzane ekudleni, ososayensi abaningi bebelokhu bekhuphula ama-alamu ngobungozi bokusetshenziswa njalo kwezinsalela, kanye nokuntuleka kokucatshangelwa okulawulayo kwemithelela engaba khona yokudla inqwaba yezimbungulu nababulali bokhula ngaso sonke isikhathi sokudla .
Iqembu lososayensi baseHarvard bafuna ucwaningo olunzulu ngezixhumanisi ezingaba khona phakathi kwezifo nokusetshenziswa kwezibulala-zinambuzane njengoba zilinganisela ukuthi abantu abangaphezu kwamaphesenti angama-90 e-United States banezinsalela zezibulala-zinambuzane emchameni nasegazini labo ngenxa yokudliwa kokudla okunezinambuzane. A cwaningo exhunywe neHarvard ithole ukuthi ukuvezwa kokudla kwezibulala-zinambuzane ngaphakathi kohlobo "olujwayelekile" kuhlotshaniswa zombili nezinkinga abesifazane abakhulelwa kanye nokubeletha izingane eziphilayo.
Ucwaningo olwengeziwe luthole ezinye izinkinga zempilo ezixhumene nokuchayeka ekudleni kuma-pesticides, kufaka phakathi i-glyphosate. I-Glyphosate yi-herbicide esetshenziswa kakhulu emhlabeni futhi iyisithako esisebenzayo ku-Roundup enophawu lukaMonsanto neminye imikhiqizo yokubulala ukhula.
Imboni Yezibulala-zinambuzane Ibuyisela Emuva
Kepha njengoba ukukhathazeka kukhuphuka, ababambisene nomkhakha wezolimo babuyela emuva. Kule nyanga iqembu labacwaningi abathathu abanobudlelwano obuseduze nezinkampani ezidayisa izibulala-zinambuzane zezolimo likhiphe umbiko ofuna ukudambisa ukukhathazeka kwabathengi nokunciphisa ucwaningo lwesayensi.
Umbiko, ekhishwe ngo-Okthoba 21, yathi “abukho ubufakazi obuqondile besayensi noma bezokwelapha obubonisa ukuthi ukuvezwa okuvamile kwabathengi ezinsaleleni zezibulala-zinambuzane kubeka engcupheni impilo. Idatha yezinsalela ze-pesticide kanye nokulinganiselwa kokuchayeka kukhombisa ukuthi abathengi bokudla bavezwa emazingeni ezinsalela ze-pesticides ezinama-oda amaningi angaphansi kwalawo okungenzeka abe nokukhathazeka kwezempilo. ”
Akumangalisi ukuthi ababhali abathathu balo mbiko basondelene kakhulu nomkhakha wezolimo. Omunye wababhali balo mbiko nguSteve Savage, imboni yezolimo umcebisi futhi owayekade esebenza eDuPont. Omunye nguCarol Burns, owayengusosayensi weDow Chemical futhi ongumxhumanisi wamanje weCortevia Agriscience, okuyi-spin-off yeDowDuPont. Umbhali wesithathu nguCarl Winter, onguSihlalo woMnyango Wezokudla Nezobuchwepheshe eNyuvesi yaseCalifornia eDavis. Inyuvesi ithole cishe $ 2 million ngonyaka kusuka embonini yezolimo, ngokusho komcwaningi waseyunivesithi, yize ukunemba kwalelo nani kungakatholakali.
Ababhali bathathe umbiko wabo baya ngqo kuCongress, bewubambile izintshumayelo ezintathu ezahlukene eWashington, DC, eyenzelwe ukuthuthukisa umyalezo wabo wokuphepha kwezibulala-zinambuzane ukuze usetshenziswe “ezindabeni zokuphepha kokudla kwabezindaba, nezeluleko zabathengi mayelana nokuthi yikuphi abathengi okufanele bakudle (noma okungafanele) bakudle.”
Izikhathi zokubulala izinambuzane zibanjelwe ezakhiweni zehhovisi zamalungu eCongress futhi, kubonakala kufanelekile, ekomkhulu le CropLife Melika, i-lobbyist embonini yezolimo.
Umsebenzi Wezemfundo, Ukudla Okucatshangwayo, Izifo Ezihlobene Nokudla, Izindaba namanothi kaCarey Gillam, izibulala-zinambuzane Bayer, umdlavuza, ososayensi bomdlavuza, chlorpyrifos, Dow, Dupont, EPA, FDA, Ukudla, glyphosate, zezempilo, Monsanto, izibulala-zinambuzane, isayensi, Thailand, USDA
IMonsanto Ithembele Kulaba "Ozakwethu" Ukuhlasela Ososayensi Abaphezulu Bomdlavuza
Posted on Mashi 31, 2019 by UStacy Malkan
Related: Imibhalo Eyimfihlo Idalula Impi kaMonsanto Ngososayensi Bomdlavuza, nguStacy Malkan
Leli phepha lichaza okuqukethwe yiMonsanto uhlelo oluyimfihlo lokuxhumana nomphakathi ukudicilela phansi igama lophiko locwaningo lomdlavuza lwe-World Health Organisation, i-International Agency for Research on Cancer (IARC), ngenhloso yokuvikela isithunzi seRoundup weedkiller. NgoMashi 2015, iqembu lomhlaba wonke lochwepheshe kuphaneli ye-IARC lahlulela i-glyphosate, isithako esiyinhloko kuRoundup, ukuthi ibe mhlawumbe i-carcinogenic kubantu.
Uhlelo lweMonsanto lubiza amagama angaphezu kweshumi nambili amaqembu "abalingani bezimboni" abaphathi benkampani abakuhlele "ukwazisa / ukugoma / ukubandakanya" emizamweni yabo yokuvikela isithunzi seRoundup, ukuvimbela izimangalo zomdlavuza "ezingenasisekelo" ekubeni umbono odumile, futhi "zinikeze ikhava yezinhlaka ezilawulayo. ” Ozakwethu bahlanganisa izifundiswa kanye namaqembu aphambili embonini yamakhemikhali nezokudla, amaqembu ezohwebo kanye namaqembu okubungaza - landela izixhumanisi ezingezansi kumashidi eqiniso anikeza imininingwane eminingi ngamaqembu ophathina.
Ngokubambisana la maphepha emininingwane ahlinzeka ngesense yokujula nobubanzi be-corporaukuhlaselwa kochwepheshe bomdlavuza we-IARC ngokwehlulwanse kaMi-onsanto edayisa kakhulu i-herbicide.
Izinhloso zikaMonsanto zokubhekana nesilinganiso se-IARC se-carcinogenicity se-glyphosate (ikhasi 5).
Umbhalo osemqoka okhishwe ngo-2017 ngo izinqubo zomthetho ngokumelene neMonsanto kuchaza “uhlelo lokulungela nokuzibandakanya” kwenkampani ekuhlelweni komdlavuza we-IARC we-glyphosate, umhlaba isetshenziswa kakhulu kwezolimo. I- idokhumenti yangaphakathi yeMonsanto - yangomhla kaFebhuwari 23, 2015 - yabela abasebenzi abangaphezu kwama-20 beMonsanto ezinhlosweni ezibandakanya "ukunciphisa umthelela wesinqumo," "ukufinyelela komlawuli," "ukuqinisekisa iMON POV" kanye "nokuhola izwi 'kubani i-IARC' kanye ne-2B intukuthelo." NgoMashi 20, 2015, i-IARC yamemezela isinqumo sayo sokuhlukanisa i-glyphosate njenge-Group 2A carcinogen, "mhlawumbe i-carcinogenic kubantu. "
Ukuthola eminye imininingwane, bheka: “Ukulungiswa Kanjani KweMonsanto Ekuhlukanisweni Komdlavuza Wamakhemikhali Okulindelekile,”NguCarey Gillam, uHuffington Post (9/19/2017)
Isigaba 1-4 seMonsanto “Abalingani Bemboni”
Ikhasi 5 le- umbhalo weMonsanto ikhomba izingxenye ezine “zabalingani bemboni” abaphathi beMonsanto abebehlele ukuzibandakanya nohlelo lwayo lwe-IARC lokuzilungiselela. La maqembu ehlangene anokufinyelela okubanzi nomthelela ekuphusheni ukulandisa ngengozi yomdlavuza evikela inzuzo yezinkampani.
Umlingani womkhakha weTier 1 angama-lobby axhaswa ngezimboni kanye namaqembu e-PR.
ICropLife International / Inhlangano Yokuvikelwa Kwezilimo YaseYurophu amaqembu okuhweba embonini yezibulala-zinambuzane
Izimpendulo ze-GMO iyiwebhusayithi yokukhangisa yokuphathwa kwezinkinga exhaswa yiMonsanto, BASF, Bayer, Dow, Dupont neSyngenta futhi iqhutshwa ngu Inkampani yakwaKetchum yomphakathi
Inhlangano ye-Biotechnology Innovation yiqembu lokuhweba lomkhakha we-biotech
Abalingani bezimboni zeTier 2 bangamaqembu angaphambili avame ukukhonjwa njengemithombo ezimele, kepha basebenza nemboni yamakhemikhali ekusithekeni kobudlelwano bomphakathi nemikhankaso yokunxenxa.
Iphrojekthi ye-genetic Literacy Project
Abalingani bemboni engu-Tier 3 bangamaqembu ezingenzi-nzuzo axhaswe izimboni zokudla. Lawa maqembu athakanyiswe kokuthi, “Xwayisa izinkampani zokudla ngethimba le-Stakeholder Engagement (IFIC, GMA, CFI) 'ngecebo lokutholwa' lokuhlinzeka ngemfundo yokuqala ngamazinga ezinsalela ze-glyphosate, chaza izifundo ezenzelwe isayensi uma kuqhathaniswa nemibono eqhutshwa yi-ajenda” yomdlavuza ozimele iphaneli.
I-International Food Information Council (IFIC) iyi-spin group exhaswa yimboni yezokudla ehola umfelandawonye wamaqembu ayi-130 axhumanisa imiyalezo mayelana nama-GMO kanye nezibulala-zinambuzane.
Inhlangano Yabenzi Begilosa (GMA) yiqembu elihola phambili lezinkampani zokudla okungenamsoco.
Isikhungo Sobuqotho Bokudla (i-CFI) iyi-spin group exhaswe imboni yezokudla.
Umlingani womkhakha we-Tier 4 "yizinhlangano zabakhiqizi abakhulu." Lawa ngamaqembu ezohwebo ahlukahlukene amele ummbila, isoya nabanye abatshali bezimboni nabakhiqizi bokudla.
Ukuhlela ukukhala ngokumelene nombiko womdlavuza ku-glyphosate
Umbhalo kaMonsanto we-PR uchaze izinhlelo zabo zokwenza izindlela zokuxhumana ezinamandla nezokuxhumana ukuze "kulungiswe ukukhala ngesinqumo se-IARC."
Ukuthi lokho kudlalwe kanjani kungabonakala emibhalweni yozakwethu embonini amaqembu abesebenzisa imiyalezo ejwayelekile nemithombo ukusola i-ejensi yocwaningo lomdlavuza ngokungalungile nokuzama ukudicilela phansi ososayensi abasebenza embikweni we-glyphosate.
Izibonelo zemiyalezo yokuhlasela zingabonakala kuwebhusayithi yeProjekthi ye-Genetic Literacy Project. Leli qembu lithi lingumthombo ozimele wesayensi, kepha, imibhalo etholwe ngumbukiso wase-US Right to Know ukuthi i-Genetic Literacy Project isebenza neMonsanto kumaphrojekthi we-PR ngaphandle kokudalula lokho kusebenzisana. UJon Entine wethule leli qembu e2011 ngenkathi uMonsanto eyiklayenti lenkampani yakhe ye-PR. Lena iqhinga lakudala leqembu langaphambili; ukuhambisa imiyalezo yenkampani ngeqembu elithi lizimele kepha akunjalo.
Uhlelo lucebisa i-Sense About Science ukuthi "ihole ukuphendula kwemboni"
Umbhalo kaMonsanto we-PR ukhuluma ngezinhlelo zokwenza izindlela zokuxhumana ezinamandla nezokuxhumana ukuze "kuqondiswe ukukhala ngesinqumo se-IARC." Lolu hlelo luphakamisa iqembu i-Sense About Science (kubakaki abanophawu lombuzo) ukuthi "liholele ekuphenduleni kwemboni futhi linikeze inkundla yezingqapheli ze-IARC nokhulumela imboni."
I-Sense About Science iyisiza somphakathi esizinze eLondon lokho kuthiwa kuthuthukisa ukuqonda komphakathi ngesayensi, kodwa iqembu "laziwa ngokuthatha izikhundla buck ukuvumelana kwesayensi noma ukuchitha ubufakazi obuvelayo bokulimala, ”Kubika uLiza Gross ku-The Intercept. Ngo-2014, iSense About Science yethule inguqulo yase-US ngaphansi kokuqondiswa kwe- UTrevor Butterworth, umbhali onomlando omude wokungavumelani naye isayensi ephakamisa ukukhathazeka ngempilo ngamakhemikhali anobuthi.
I-Sense About Science ihlobene ne- Isayensi Media Center, isayensi PR agency eLondon ethola uxhaso lwezinkampani futhi yaziwa nge ukugcizelela imibono yenkampani yesayensi. Intatheli ephethe sisondelene neSayensi Media Center, UKate Kelland, ushicilele izindatshana eziningana kwiReuters ezigxeka i-ejensi yomdlavuza ye-IARC eyayisekelwe kuyo izindaba ezingamanga futhi ukubika okungaphelele okungaphelele. Izindatshana zeReuters zithuthukiswe kakhulu ngamaqembu kaMonsanto “abalingani bemboni” futhi zasetshenziswa njenge isisekelo se ukuhlaselwa kwezepolitiki ngokumelene ne-IARC.
"I-IARC iyazenqaba izimangalo ezingamanga ku-Reuters," Isitatimende se-IARC (3 / 1 / 18)
Indaba ka-Reuters ka-Aaron Blair IARC ikhuthaza ukulandisa okungamanga, USRTK (7 / 24 / 2017)
Isimangalo seReuters sokuthi i-IARC "ihlele kahle" okutholakele nakho kungamanga, USRTK (10 / 20 / 2017)
"Ngabe izibopho zezinkampani zinomthelela ekusetshenzisweni kwesayensi?" Ukulunga nokunemba ekubikeni (7 / 24 / 2017)
“Bandakanya uHenry Miller”
Ikhasi 2 lombhalo weMonsanto PR likhomba okwokuqala okulethwa ukuhlelela nokulungiselela: "Bandakanya uHenry Miller" "ukugoma / ukusungula umbono womphakathi nge-IARC nezibuyekezo."
"Ngingathanda uma ngingaqala ngokusalungiswa okuseqophelweni eliphezulu."
UHenry I. Miller, MD, osebenza naye eHoover Institution kanye nomqondisi osungula iHhovisi Le-Biotechnology le-FDA, une umlando omude oqoshiwe wokusebenzisana nezinkampani ukuvikela imikhiqizo enobungozi. Uhlelo lweMonsanto lukhomba “umnikazi we-MON” womsebenzi njengo-Eric Sachs, isayensi, ubuchwepheshe nobuchwepheshe beMonsanto.
Imibhalo kamuva kubika iThe New York Times kwembule lokho amaSachs uthumele i-imeyili uMiller kusasele isonto ngaphambi kombiko we-IARC glyphosate ukubuza ukuthi ngabe uMiller wayenesifiso sokubhala "ngalesi sinqumo esiyimpikiswano." UMiller uphendule wathi, "Ngingathanda uma ngingaqala ngidalelwe ubuciko obusezingeni eliphezulu." Ngo-Mashi 23, uMiller uthumele isihloko kuForbes "okubonakala kakhulu" okusalungiswa okuhlinzekwe nguMonsanto, ngokusho kwe Times. IForbes inqamule ubudlelwano bayo noMiller ngemuva kwesigameko sokubhala ngezipoki futhi ususe izindatshana zakhe kusuka kusayithi.
Yize umqulu weMonsanto PR ungazange uqambe igama le- umkhandlu waseMelika oxhaswe ngezinkampani weSayensi nezeMpilo (ACSH) phakathi "kwabalingani bayo bezimboni," ama-imeyili akhishwe nge-litigation show ukuthi iMonsanto uxhase uMkhandlu WaseMelika Wezesayensi Nezempilo futhi wacela iqembu ukuthi libhale ngombiko we-IARC glyphosate. Ama-imeyili akhombisa ukuthi abaphathi beMonsanto bebengakhululekile ngokusebenzisana ne-ACSH kodwa benze njalo noma kunjalo ngoba, "asinabo abalandeli abaningi futhi asikwazi ukulahlekelwa yilabo abambalwa esinabo."
Umholi wesayensi ephezulu kaMonsanto uDaniel Goldstein ubhalele ozakwabo ukuthi, “Ngingakuqinisekisa ukuthi anginabo bonke abantu abanenkanyezi nge-ACSH- banenqwaba yezinsumpa- kodwa: NGEKE UTHOLE UKUBALULEKA OKUNGCONO KWEDOLOLA LAKHO kune-ACSH” (kugcizelela yena). UGoldstein uthumele izixhumanisi zezinto eziningi ze-ACSH ezikhuthaza futhi zivikele ama-GMO kanye nezibulala-zinambuzane azichaze ngokuthi “ZISEBENZISA KAKHULU.”
Bona futhi: Ukulandelela i-Agrichemical Industry Propaganda Network
Landela okutholwe yi-US Right to Know nokusakazwa kwabezindaba mayelana nokusebenzisana phakathi kwamaqembu embonini yokudla kanye nezifundiswa ku ikhasi lethu lokuphenya. Imibhalo ye-USRTK iyatholakala kufayela le- Umtapo Wezincwadi Wezimboni Zamakhemikhali isingathwe ngu-UCSF.
Ukudla Okucatshangwayo, I-GMO, Uphenyo lwethu, izibulala-zinambuzane "kuhlelwe" glyphosate, U-Aaron Blair, izifundiswa, Ukubuyekezwa Kwezifundiswa, AgBioChatter, Umkhandlu waseMelika weSayensi nezeMpilo, BASF, Bayer, Bio, Kwenziwe kabusha, Inhlangano ye-Biotechnology Innovation, CFI, CLI, UDick Taverne, Dow, Dupont, U-Eric Sachs, I-European Crop Protection Association, Iphrojekthi ye-genetic Literacy Project, I-GMA, Izimpendulo ze-GMO, Henry Miller, Isikhungo seHoover, IARC, IFIC, abalingani bomkhakha, UKate Kelland, Inkampani yakwaKetchum yomphakathi, Monsanto, Reuters, Isayensi Media Center, Umuzwa Ngezesayensi, Syngenta, UTrevor Butterworth, World Health Organization
Izibopho zikaPamela Ronald's to Chemical Industry Front Groups
Posted on December 27, 2018 by UStacy Malkan
Kubuyekezwe ngoJuni 2019
UPamela Ronald, PhD, uprofesa wezifo zezitshalo e-University of California, uDavis nombhali wencwadi yango-2008 ethi “Tomorrow's Table,” ungummeli owaziwayo wokudla okwenziwe ngezakhi zofuzo. Okungaziwa kakhulu iqhaza likaDkt. Ronald ezinhlanganweni eziziveza njengabantu abazimele ngaphandle kwezimboni, kodwa empeleni basebenzisana nezinhlangano zamakhemikhali ukukhuthaza nokunxenxa ama-GMO kanye nezibulala-zinambuzane, ezinhlelweni ezingafihli lutho emphakathini.
Ixhumana neqembu eliphambili lezimboni zezolimo
UPamela Ronald unobudlelwano obuningi neqembu eliphambili lezimboni zezolimo, i IGenetic Literacy Project, kanye nomqondisi wayo omkhulu, uJon Entine. Ubasize ngezindlela eziningi. Ngokwesibonelo, imibhalo ikhombisa ukuthi ngonyaka wezi-2015, UDkt. Ronald uqoke u-Entine njengomuntu ophakeme futhi ofundisa ezokuxhumana kwezesayensi e-UC Davis, futhi wabambisana ne-Genetic Literacy Project ukusingatha imboni yezolimo exhaswe ngemali umcimbi womlayezo abaqeqeshe abahlanganyeli ukuthi bangayikhangisa kanjani imikhiqizo yezolimo.
Iphrojekthi ye-Genetic Literacy Project ichazwe ku umklomelo Okwezwe uphenyo njenge “website eyaziwayo yenkulumo-ze” eyadlala indima enkulu emkhankasweni weMonsanto wokuhlambalaza umbiko wenhlangano yocwaningo lomdlavuza yeWorld Health Organisation ngeglyphosate. Kwi Idokhumenti ka-2015 PR, IMonsanto ikhombe i-Genetic Literacy Project phakathiabalingani bemboni ” inkampani ihlele ukuzibandakanya "nokuhlela ukukhala" ngombiko womdlavuza. I-GLP kusukela lapho isishicilele izindatshana eziningi ezihlasela ososayensi bomdlavuza njenge- "anti-chemical enviros" eyaqamba amanga futhi yazibandakanya nayo inkohlakalo, ukuhlanekezela, ukufihla nokukhwabanisa.
I-Entine inezibopho zesikhathi eside embonini yamakhemikhali; umsebenzi wakhe uhlanganisa ukuvikela izibulala-zinambuzane, industrial Amakhemikhali, amapulasitiki, ukukhwabanisa, Kanye imboni kawoyela, imvamisa nge ukuhlaselwa kososayensi, izintatheli futhi izifundiswa. Faka umkhankaso i-Genetic Literacy Project ngo-2011 lapho UMonsanto wayeyikhasimende yenkampani yakhe yezobudlelwano nomphakathi. I-GLP ekuqaleni ehlotshaniswa ne-STATS, izintatheli zeqembu elingenzi nzuzo zichaze njenge- “umkhankaso we-disinformation”Lokho imbewu ingabaza isayensi futhi “eyaziwa ngokuvikela kwayo imboni yamakhemikhali. "
Ngo-2015, i-Genetic Literacy Project yathuthela enhlanganweni entsha yabazali, i-Science Literacy Project. Ukufakwa kwentela kwe-IRS ngalowo nyaka kubonisiwe ukuthi uDkt. Ronald wayeyilungu lebhodi eyasungula i-Science Literacy Project, kodwa ama-imeyili kusuka ngo-Agasti 2018 khombisa ukuthi uDkt. Ronald uqinisekise u-Entine ukuthi asuse igama lakhe kwifomu lentela ngemuva kokuthi kwaziwe ukuthi ubhalwe lapho (ifomu elichitshiyelwe lentela selikhona manje kuyatholakala lapha). UDkt. Ronald ubhalele u-Entine, “Angizange ngisebenze kuleli bhodi futhi angizange nginike mvume yokuthi igama lami libhalwe. Ngicela uthathe izinyathelo ngokushesha ukwazisa i-IRS ukuthi igama lami lifakwe ohlwini ngaphandle kwemvume. ” U-Entine ubhale ukuthi unezinkumbulo ezihlukile. “Ngikhumbula kahle ukuthi wavuma ukuba yingxenye yebhodi futhi wahola ibhodi lokuqala… Wawunomdlandla futhi ungisekela empeleni. Akukho kungabaza engqondweni yami ukuthi uvumelane nalokhu. ” Yize kunjalo wavuma ukuzama ukususa igama lakhe embhalweni wentela.
Laba bobabili baphinde baxoxa ngefomu lentela ngoDisemba 2018 ngemuva kokuthi kuthunyelwe leli phepha. Kubhale u-Entine, “Ngikubhalile ku-original 990 ngokususelwa engxoxweni yocingo lapho uvumile ukuba khona ebhodini. Ngesikhathi ungimelela ukuthi awuvumelani nalokhu, ngicishe irekhodi njengoba ubucelile. ” Ku- enye i-imeyili ngalolo suku, ukhumbuze uDkt. Ronald ukuthi “empeleni ubuhlangene nale 'nhlangano: njengoba besisebenza ndawonye, ​​ngaphandle komzamo nangokwakhayo, ekwenzeni ikamu lamabhuzu enyuvesi yakho libe yimpumelelo enkulu.”
Amafomu entela eSayensi Literacy Project manje abala amalungu amathathu ebhodi: Entine; UDrew Kershen, owayenguprofesa wezomthetho futhi owayesebhodini le- “Academics Review,” iqembu elalithi lizimele ngenkathi ithola izimali zayo ezinkampanini zezolimo; futhi UGeoffrey Kabat, ingcweti yezifo ezisebenza ku ibhodi labeluleki besayensi Okwe Umkhandlu waseMelika weSayensi nezeMpilo, iqembu lelo uthole imali evela kuMonsanto ngomsebenzi wayo wokuvikela ama-pesticides kanye nama-GMO.
Isungulwe, yahola iqembu le-UC Davis eliphakamisa imizamo ye-PR yomkhakha
UDkt Ronald wayengumqondisi osungula iWorld Food Center's Isikhungo Sokufunda Nokufunda Kwezolimo (IFAL), iqembu elasungulwa e-2014 e-UC Davis lokuqeqesha ubuhlakani kanye nabafundi ukukhuthaza ukudla okwenziwe ngezakhi zofuzo, izitshalo nemithi yokubulala izinambuzane. Leli qembu alizivezi ngokugcwele izimali zalo.
Imibhalo ikhombisa ukuthi uDkt Ronald unikele UJon Entine neqembu lakhe eliphambili embonini I-Genetic Literacy Project yesikhulumi e-UC Davis, ukuqoka i-Entine njengomuntu omkhulu ongakhokhiwe we-IFAL kanye nomfundisi nomeluleki ohlelweni lokuthweswa iziqu kwezokuxhumana kwezesayensi. U-Entine akaseyena umngani e-UC Davis. Bona incwadi yethu yango-2016 eya kwiWorld Food Center ebuza ngezimali ze-Entine ne-IFAL kanye nabo incazelo engacacile mayelana nokuthi uxhaso lwabo luvelaphi.
NgoJulayi 2014, uDkt. Ronald waveza ku-imeyili asebenza naye ukuthi u-Entine wayeyi- umhlanganyeli obalulekile ongabanika iziphakamiso ezinhle zokuthi bangaxhumana nobani ukuze bathole imali eyengeziwe ngomcimbi wokuqala we-IFAL. NgoJuni 2015, i-IFAL yabamba iqhaza "Ikamu lokuqala le-Biotech Literacy Project”Nge-Genetic Literacy Project kanye ne- Ukubuyekezwa kwezifundo zeqembu leMonsanto. Abahleli bathi lo mcimbi uxhaswe yimithombo yezemfundo, kahulumeni neyezimboni, kepha imithombo engeyona eyezimboni iyenqabile ukuxhasa le micimbi kanye ne kuphela umthombo wokuthola imali ongalandeleka uvela embonini, ngokusho kokubikwa kukaPaul Thacker ku-The Progressive.
Amarekhodi entela akhombisa lokho kubuyekezwa kwezifundo, okwakuthola okwayo imali evela embonini yezolimo iqembu lokuhweba, lisebenzise u- $ 162,000 engqungqutheleni yezinsuku ezintathu e-UC Davis. Inhloso yekamu ebhuthini, ngokwe-ajenda, bekuzoqeqesha nokuxhasa ososayensi, izintatheli nabaphenyi bezemfundo ukuze banxenxe umphakathi kanye nabenzi benqubomgomo ngezinzuzo zama-GMO nezibulala-zinambuzane.
Izikhulumi enkanjini yebhuthi i-UC Davis zifakiwe UJay Byrne, Owayengumqondisi wezokuxhumana ezinkampanini kaMonsanto; Hank campbell yezimali ezixhaswa yiMonsanto Umkhandlu waseMelika Wezesayensi Nezempilo; osolwazi abanezibopho zomkhakha ezingadalulwanga ezifana USolwazi Emeritus Bruce Chassy wase-University of Illinois futhi USolwazi Kevin Folta waseYunivesithi yaseFlorida; UCami Ryan, manje osebenzela iMonsanto; UDavid Ropeik, umxhumanisi wokuqonda ngobungozi onenkampani ye-PR amaklayenti afaka iDow neBayer; kanye nabanye ababambisene nomkhakha wezolimo.
Izikhulumi eziyinhloko kwakunguDkt. Ronald, UYvette d'Entremont uSci Babe, "umxhumanisi wezesayensi" ovikela izibulala-zinambuzane neziswidi zokufakelwa ngenkathi ethatha imali ezinkampanini ezidayisa leyo mikhiqizo, noTed Nordhaus we-Breakthrough Institute. (UNordhaus naye wabalwa njengelungu lebhodi leSayensi Literacy Project kwifomu lokuqala lentela lika-2015/2016, kodwa igama lakhe lasuswa kanye noDkt. Ronald's kwifomu echitshiyelwe i-Entine efakwe ngo-2018; uNordhaus uthe akakaze asebenze ebhodini.)
Ukupheka ukuduba kukaChipotle
Ama-imeyili akhombisa ukuthi uDkt Ronald noJon Entine babambisene ekuthumeleni imiyalezo ukudicilela phansi abagxeki bokudla okwenziwe ngezakhi zofuzo. Kwesinye isikhathi, uDkt. Ronald uphakamise ukuthi ahlele ukuduba ngokumelene nechungechunge lokudlela laseChipotle ngenxa yesinqumo salo sokunikela nokuphromotha ukudla okungewona okwe-GMO.
Ngo-Ephreli 2015, uDkt Ronald wathumela i-imeyili i-Entine futhi U-Alison Van Eenennaam, PhD, owayeyisisebenzi sangaphambilini seMonsanto nochwepheshe wezokweluleka ngokubambisana e-UC Davis, ukusikisela ukuthi bathole umfundi ozobhala ngabalimi abasebenzisa izibulala-zinambuzane ezinobuthi kakhulu ukutshala ummbila ongewona owe-GMO. "Ngiphakamisa ukuthi silazise leli qiniso (uma nje sesithole imininingwane) bese sihlela ukuduba kwe-chipotle, ”Kubhala uDkt Ronald. U-Entine wayalela umlingani wakhe ukuthi abhale i-athikili ye-Genetic Literacy Project ngesihloko esithi "ukusetshenziswa kwezibulala-zinambuzane kuvame ukukhuphuka" lapho abalimi beshintshela kwimodeli engeyona eye-GMO ukuhlinzeka izindawo zokudlela ezinjengeChipotle. I- esihlokweni, obhaliswe ngokuhlanganyela ngu-Entine futhi etusa ubulungu bakhe be-UC Davis, wehluleka ukufakazela leso simangalo ngedatha.
Iqembu le-biotech spin elenziwe ngokubambisana iBioFortified
UDkt. Ronald wasungula futhi wakhonza njengelungu lebhodi (2012-2015) le I-Biology Fortified, Inc. (i-Biofortified), iqembu elithuthukisa ama-GMO kanye ineqembu lesishoshovu sozakwethu lokho kuyahlela imibhikisho yokubhekana nabagxeki baseMonsanto. Abanye babaholi beBiofortified kufaka phakathi ilungu lebhodi lokusungula uDavid Tribe, isazi sezofuzo e-University of Melbourne owasungula Ukubuyekezwa Kwezemfundo, iqembu elalizimele ngenkathi ethola izimali zezimboni, futhi esebenzisana ne-IFAL ukusingatha iBiotech Literacy Project “camp boot” e-UC Davis.
Owayelilungu lebhodi uKevin Folta (2015-2018), usosayensi wezitshalo eNyuvesi yaseFlorida isihloko sendaba yeNew York Times ebika ukuthi udukise umphakathi ngokusebenzisana kwemboni okungadalulwanga. Ama-blogger ase-Biofortified afaka uSteve Savage, owake waba khona Isisebenzi saseDuPont saphenduka umxhumanisi wemboni; UJoe Ballanger, a umxhumanisi weMonsanto; no-Andrew Kniss, one uthole imali evela kuMonsanto. Imibhalo iphakamisa ukuthi amalungu eBiofortified axhumene nge imboni yezibulala-zinambuzane emkhankasweni wokunxenxa ukuphikisa imikhawulo yezibulala-zinambuzane eHawaii.
Udlale indima ehamba phambili kumabhayisikobho e-propaganda axhaswa ngezimboni
UDkt. Ronald uveze ngokugqamile kwiFood Evolution, ifilimu eliwumbhalo mayelana nokudla okwenziwe ngezakhi zofuzo okuxhaswa yiqembu lezokuhweba i-Institute for Food Technologists. Inqwaba yezifundiswa zinayo wabiza inkulumo-ze yefilimu, nabantu abambalwa okwaxoxwa nabo ngefilimu ichaze inqubo ekhohlisayo yokuqopha ifilimu futhi wathi imibono yabo ikhishwe kumongo.
Umeluleki womkhankaso wobudlelwano bomphakathi obususelwa eCornell
UDkt Ronald usebhodini lokweluleka leCornell Alliance for Science, umkhankaso we-PR ozinze eCornell University okhuthaza ama-GMO kanye nemithi yokubulala izinambuzane usebenzisa imiyalezo yezimboni zezolimo. Ixhaswe ngokuyinhloko yiBill & Melinda Gates Foundation, iCornell Alliance for Science inayo waphikisana nokusetshenziswa koMthetho Wenkululeko Yolwazi ukuphenya izikhungo zikahulumeni, udukise umphakathi ngolwazi olungaqondile nezithunywa eziphakeme ezingathembekile; bheka imibhalo ekhasini lethu lamaqiniso.
Uthola imali evela embonini yezolimo
Imibhalo etholwe yi-US Right to Know ikhombisa ukuthi uDkt Ronald uthola isinxephezelo ezinkampanini zezolimo ukuze akhulume emicimbini lapho ekhuthaza khona ama-GMO kubabukeli abakhulu izinkampani ezifuna ukubathonya, njengodokotela bezokudla. Ama-imeyili asuka kuNovemba 2012 ahlinzeka ngesibonelo sendlela uDkt Ronald asebenza ngayo nezinkampani.
Umsebenzi waseMonsanto uWendy Reinhardt Kapsak, udokotela wezokudla owake wasebenzela imboni yokudla spin iqembu IFIC, wamema uRonald ukuba azokhuluma ezingqungqutheleni ezimbili ngo-2013, iFood 3000 kanye ne-Academy of Nutrition and Dietetics Food and Nutrition Conference ne-Expo. Ama-imeyili akhombisa ukuthi laba ababili kuxoxiswane ngezimali nokuthengwa kwezincwadi futhi wavuma ukuthi uDkt. Ronald uzokhuluma eFood 3000, ingqungquthela eyayihlelwe yinkampani ye-PR uPorter Novelli uKapsak athi izofinyelela "kwabezindaba abaphezulu abangama-90 ababa nomthelela wokudla kanye nabadlondlobele." (UDkt. Ronald ukhokhe u- $ 3,000 kulo mcimbi). UKapsak ucele buyekeza amaslayidi kaDkt. Ronald bese usetha ucingo lokuxoxa ngemiyalezo. Futhi kuphaneli bekukhona umongameli uMary Chin (udokotela wezokudla okwathi ubonisana neMonsanto), kanye nabamele iBill & Melinda Gates Foundation neMonsanto, noKapsak enikeza izinkulumo zokuvula. UKapsak ubike kamuva ukuthi iphaneli lithole ukubuyekezwa okukhulu ngabahlanganyeli bethi bazokwabelana ngombono wokuthi, "Kufanele sibe ne-biotech yokusiza ukondla umhlaba. "
Ezinye izingxoxo zokuxhaswa kwezimboni zikaDkt Ronald zifake owe-2014 inkulumo eMonsanto ngoba $ 3,500 kanye namakhophi wencwadi yakhe ayi-100 yena unqabile ukuthumela ku-tweet mayelana; nokubandakanyeka kokukhuluma ngo-2013 akubhalisele IBayer AG nge $ 10,000.
I-Watch Retraction ibike ukuthi, “u-2013 ubungunyaka onzima kusazi sezinto eziphilayo uPamela Ronald. Ngemuva kokuthola iprotheni ebonakala ivusa amasosha omzimba elayisi ukuvikela isifo esivamile sebhaktheriya - esikisela indlela entsha yokwakha izitshalo ezingamelana nezifo - yena nethimba lakhe kwadingeka bahoxise amaphepha amabili ngo-2013 ngemuva kokuthi bengakwazanga ukuphindaphinda abakutholile. Amacala: uhlobo lwebhaktheriya olubhalwe kabi kanye ne-assay eguquguqukayo kakhulu. Kodwa-ke, ukunakekela nokusebenza obala akubonisile kwamzuzela 'ukwenza okulungile'wavuma kithi ngaleso sikhathi. "
"Wenzani ngokuhlehlisa okubuhlungu? I-Q & A enoPamela Ronald noBenjamin Swessinger, " I-Watch Retraction (7.24.2015)
"Ngabe isithunzi sesayensi sikaPamela Ronald, ubuso bomphakathi bamaGMOs, singasindiswa?”NguJonathan Latham, Izindaba Ezizimele Zesayensi (11.12.2013)
"UPamela Ronald wenza okulungile futhi, ehoxisa iphepha leSayensi, " I-Watch Retraction (10.10.2013)
"Ukwenza okulungile: Abaphenyi bahoxisa iphepha lokuzwa ikhoramu ngemuva kwenqubo yomphakathi, " I-Watch Retraction (9.11.2013)
Ukudla Okucatshangwayo, I-GMO, Uphenyo lwethu Ukubuyekezwa Kwezifundiswa, I-Academy Yokudla Ne-Dietetics, ACSH, U-Alison Van Eenennaam, Umkhandlu waseMelika weSayensi nezeMpilo, U-Andrew Kniss, Bayer, Isisekelo seBill & Melinda Gates, Kwenziwe kabusha, I-Biology Fortified Inc., Iphrojekthi Ye-Biotech Literacy, Ikamu lokuqala le-Biotech Literacy Project, Isikhungo Sokuqhekeka, UBruce Chassy, UCami Ryan, ICornell Alliance yeSayensi, Cornell University, UDavid Ropeik, UDavid Tribe, Dow, UDrew Kershen, Dupont, Ukudla 3000, Ukuvela Kokudla, AmaGates Foundation, Iphrojekthi ye-genetic Literacy Project, UGeoffrey Kabat, I-GMO, Hank campbell, IFAL, Isikhungo Sokufunda Nokufunda Kwezolimo, Isikhungo Sabadwebi Bezokudla, UJay Byrne, UJoe Ballanger, UJon Entine, UKevin Folta, MAMIzinganekwane, Monsanto, Pamela Ronald, UPorter Novelli, Iphrojekthi Yezesayensi Yokufunda, Isevisi Yokuhlola Izibalo, USteve Savage, UTed Nordhaus, I-Sci Babe, Itafula Lakusasa, UC Davis, University of Florida, University of Illinois, University of Melbourne, UWendy Reinhardt Kapsak, Isikhungo Sezokudla Somhlaba, Yvette d'Entremont